ရွာဓလေ့ အပျိုစင်လေးတစ်ယောက် လင်ကောင်မပေါ်ပဲဗိုက်ထွက်လို့ ဆေးနည်းပေးလိုက်သောအခါ.. - Reader Choice
ရွာဓလေ့ အပျိုစင်လေးတစ်ယောက် လင်ကောင်မပေါ်ပဲဗိုက်ထွက်လို့ ဆေးနည်းပေးလိုက်သောအခါ..
Team Ag · Posted on January 13, 2021
ရွာဓလေ့အပျိုစင်လေးတစ်ယောက် လင်ကောင်မပေါ်ပဲဗိုက်ထွက်လို့ ဆေးနည်းပေးလိုက်သောအခါ..
ဆေးကုသိုလ် ရှယ်ပေးပါ.မိမိ ပတ်ဝန်းကျင်သိရအောင် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ကြုံခဲ့ရတဲ့ သင်္ဘောရွက်အစွမ်း ကျွန်တော် အိမ်ဘေးက ၂၂နှစ်အရွယ် ကလေးမလေးရောဂါစဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စဖြစ်တဲ့ ရောဂါဟာ ဗိုက်မှာ ဘာရယ်မသိတဲ့ အလုံးလေးစတည်လာပါတယ်။
အဲ့မှာ တောဓလေ့ မြန်မာပီပီအချို့က ဗိုက်ကြီးတယ်ပြောလို့ပြော လင်ပြောရမှာရှက်တာနေမှာဆိုလိုဆိုနဲ့မိဘတွေကလဲရိုးချက်သားသမီးကိုမယုံပဲ သူများပြောစကားနဲ့ ကလေးမလေးကို စတင်ပြီး မကြည်ပါတော့တယ်။ကလေးမလေးမှာ ရောဂါထက်
ပတ်ဝန်းကျင်ရိုက်ခက်မှု့ဒဏ်ကြောင့် ခုခံအားကျဆင်းလာပြီး တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ ပိန်ခြုံးချိလာပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ မဖြစ်တဲ့ အဆုံးမှာ ဆေးရုံကို စတင်ပြီးတက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ရာကနေကလေးမလေးမှာ စဖြစ်ဖြစ်ချင်း ရောဂါနုပေမဲ့ မိဘတွေရဲ့ ပေါဆမှု့ကြောင်း ရောဂါရင့်ကြပ်နေခဲ့ပါပြီ။
ဒီလိုနဲ့ ဆေးရုံတင်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ သားအိမ်ထဲမှာ အကြိတ်ကင်ဆာဖြစ်နေပြီးဆိုတာ စစ်ဆေးချက်ထွက်လာပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ စဆေးရုံတင်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ဓတ်ကင်ရတာနဲ့ ဘာနဲ့ဆိုတော့ ကလေးမလေး ခေါင်းမှာလဲ ဆံပင်တွေ က မယ်သီလရှင် ခေါင်းတိုင်းဖြစ်နေပါတော့သည်။
အစ ပထမပတ်တက်ရင်းနဲ့ကို ငွေ ၁ဝသိန်းကျော်လောက်ကုန်ခဲ့ပါပြီး အခြေခံလူတန်းစားဆိုတော့နဲနဲငွေအင်းအားလဲ ချိနေပြီးရှာနေရပါပြီ။ဒီလိုနဲ့ နောက်တစ်လပတ်ကြာတော့ ဓတ်ဒုတိယအကြိမ် ကင်ရတော့မဲ့အချိန်မှာ . မိခင်မှာ သူတွက် ငွေးတိုး ၁၅သိန်းချီးလာပြီးဆိုတာ ကောင်မလေးကလဲ သိနေပါတော့သည်။
ဆရာဝန်ကြီးကလဲ ပျောက်မယ်ဆိုတာ အာမခံကုသာကုနေရတယ်။ဒီလိုနဲ့ ဆေးရုံကပြန်လာတော့ အခြေမဟန် ဆက်ကုဖို့လဲငွေအားကမနိုင်ဆိုတော့ သမီးလေးမှာ အမေရယ်..သမီးမခံစားနိုင်တော့ဘူးသမီးကို မကုပါတော့နဲ့ သမီးအသေသာခံလိုက်ပါတော့မည်ဆိုပြီးငိုပါလေရောလား။
ကျွန်တော် လဲ အဲ့အသံကြား Facebook ပေါ်က သဘောင်္ရွက်အကြောင်းက စာဖတ် ဒီလိုနဲ့ သွားတိုင်ပင်တယ်။ဒီလိုဒီလိုတော့ရှိတယ် ကျွန်တော့် ကိုယုံလို့ရင်ကျွန်တော် ပြောတဲ့ ဆေးနည်းကိုသောက်မှာလား ကျွန်တော် ရှာပေးမယ်ဆိုတော့ ။
မအေကမလုပ် သမီးကတော့အကိုရယ် ကျမသေလူပဲ အကိုဘာနေနေ သမီးအဆင်ပြေမယ်ဆိုသောက်ပါမယ်လို့ ကောင်မလေးက ခတ်ချိချိလေးနဲ့ ကတုံးလေးပြောရှာပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော် ဈေးရောင်းသွားရင်ကုသိုလ် နေစဉ်ရအောင် သင်္ဘော(အဖို)ရောက်လေအရပ်တိုင်းရှာခူးပါတော့တယ်၊။
နောက်တစ်လလောက်နေတော့ လူက ပြည့်ပြည့်ဝ၀ နဲနဲဖြစ်လာတော့ ကောင်မလေးက ဆေးရုံကိုတစ်ခေါက်လောက်သွားချင်နေပါတော့တယ်။သူသွားချင်တဲ့အကြောင်းရင်းက သူရောဂါအခြေနေကို သိချင်နေတဲ့
ဆန္ဒ ပြင်းပြရင်မနက်ဆေးရုံသွား ချက်ချင် ဆရာဝန်ကလဲ အန့်တွေအော ကျွန်တော် ဖို့လဲ မုန့်တွေဝယ်လာပြီးအကို တဲ့ ကျမ အကြိတ်မရှိတော့ဘူးတဲ့ ဆရာက ဘာဆေးတွေသောက်တာလဲ မေးနေတယ်တဲ့။
ကျွန်တော် ဗျာ ဝမ်းသာလိုက်တာ ကိုယ်ကူညီလိုက်တဲ့ သေမင်းရောဂါသယ်က ပျောက်ကင်းသွားတော့ဘဝမှာ အတော်ကို ပီတိဖြစ်တဲ့နေ့ပဘဲ ဒါကြောင့် သင်္ဘောရွက်သည် ထိုရောဂါတစ်ခုထဲကိုသာပျောက်စေတာမဟုတ်ပဲ
အမျိုးမျိုးသော အရာဆဲလ်တွေအမြစ်တွေကိုခြေနိုင်စွမ်းရှိတာမို့ကင်ဆာသမားတွေအထူးသင့်တော်တယ်လို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော် လိုက်ရပါတယ်။စာမရေးတတ်လို့အမှားပါရင်ခွင့်လွတ်ပါ။လမ်းပြကြယ်ဖြူ
အစာအိမ်ဖြစ်တဲ့သူတွေလဲသောက်နိုင်ပါတယ်အရမ်းကောင်းပါတယ်။အဖိုပင်ပါ သူ့အမြစ်ကို သကြားနဲ့ရောပြုပ်ပြီးစားရင် အသည်းရောဂါပျောက်ပါတယ်။အကြမ်းပန်ကန်လုံးနဲ့မနက်တခွက်ညတခွက်သောက်ပေးပါတပါတ်အတွင်းသိသာလာလိမ့်မယ်….
အဖိုပင်ပါ သူ့အမြစ်ကို သကြားနဲ့ရောပြုပ်ပြီးစားရင် အသည်းရောဂါပျောက်ပါတယ်။သဘောပင်အဖို အမသိချင်ရင် အမြစ်အဖျားကိုကြည့်ပါ အမြစ်အခွပါရင်အမ အခွမပါရင်အဖို ။
ကျနော်ကတော့သင်္ဘောရွက်လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကို ပြုတ်လည်းစားတယ် ….မီးမြှိုက်ပြီးလည်း ရေစင်စင်ဆေး ငပိချက်နဲ့တို့စားပါတယ်ထူးခြားချက်ကတော့ကျနော်ဝမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါအစာအိမ်ဝေဒနာလုံးဝမရှိပါကြောင်း တဲ့ဗျာ…..။
ရှာဓလအေ့ပြိုစငျလေးတဈယောကျ လငျကောငျမပျေါပဲဗိုကျထှကျလို့ ဆေးနညျးပေးလိုကျသောအခါ..
ဆေးကုသိုလျ ရှယျပေးပါ.မိမိ ပတျဝနျးကငျြသိရအောငျ ကြှနျတျောကိုယျတိုငျ ကွုံခဲ့ရတဲ့ သင်ျဘောရှကျအစှမျး ကြှနျတျော အိမျဘေးက ၂၂နှဈအရှယျ ကလေးမလေးရောဂါစဖွဈပါတယျ။သူတို့စဖွဈတဲ့ ရောဂါဟာ ဗိုကျမှာ ဘာရယျမသိတဲ့ အလုံးလေးစတညျလာပါတယျ။
အဲ့မှာ တောဓလေ့ မွနျမာပီပီအခြို့က ဗိုကျကွီးတယျပွောလို့ပွော လငျပွောရမှာရှကျတာနမှောဆိုလိုဆိုနဲ့မိဘတှကေလဲရိုးခကျြသားသမီးကိုမယုံပဲ သူမြားပွောစကားနဲ့ ကလေးမလေးကို စတငျပွီး မကွညျပါတော့တယျ။ကလေးမလေးမှာ ရောဂါထကျ
ပတျဝနျးကငျြရိုကျခကျမှု့ဒဏျကွောငျ့ ခုခံအားကဆြငျးလာပွီး တဈနထေ့ကျ တဈနေ့ ပိနျခွုံးခြိလာပါတော့တယျ။ဒီလိုနဲ့ မဖွဈတဲ့ အဆုံးမှာ ဆေးရုံကို စတငျပွီးတကျဖို့ ဆုံးဖွတျရာကနကေလေးမလေးမှာ စဖွဈဖွဈခငျြး ရောဂါနုပမေဲ့ မိဘတှရေဲ့ ပေါဆမှု့ကွောငျး ရောဂါရငျ့ကွပျနခေဲ့ပါပွီ။
ဒီလိုနဲ့ ဆေးရုံတငျလိုကျတဲ့ အခြိနျမှာ သားအိမျထဲမှာ အကွိတျကငျဆာဖွဈနပွေီးဆိုတာ စဈဆေးခကျြထှကျလာပါတော့တယျ။ဒီလိုနဲ့ စဆေးရုံတငျလိုကျတဲ့ အခြိနျမှာ ဓတျကငျရတာနဲ့ ဘာနဲ့ဆိုတော့ ကလေးမလေး ခေါငျးမှာလဲ ဆံပငျတှေ က မယျသီလရှငျ ခေါငျးတိုငျးဖွဈနပေါတော့သညျ။
အစ ပထမပတျတကျရငျးနဲ့ကို ငှေ ၁ဝသိနျးကြျောလောကျကုနျခဲ့ပါပွီး အခွခေံလူတနျးစားဆိုတော့နဲနဲငှအေငျးအားလဲ ခြိနပွေီးရှာနရေပါပွီ။ဒီလိုနဲ့ နောကျတဈလပတျကွာတော့ ဓတျဒုတိယအကွိမျ ကငျရတော့မဲ့အခြိနျမှာ . မိခငျမှာ သူတှကျ ငှေးတိုး ၁၅သိနျးခြီးလာပွီးဆိုတာ ကောငျမလေးကလဲ သိနပေါတော့သညျ။
ဆရာဝနျကွီးကလဲ ပြောကျမယျဆိုတာ အာမခံကုသာကုနရေတယျ။ဒီလိုနဲ့ ဆေးရုံကပွနျလာတော့ အခွမေဟနျ ဆကျကုဖို့လဲငှအေားကမနိုငျဆိုတော့ သမီးလေးမှာ အမရေယျ..သမီးမခံစားနိုငျတော့ဘူးသမီးကို မကုပါတော့နဲ့ သမီးအသသောခံလိုကျပါတော့မညျဆိုပွီးငိုပါလရေောလား။
ကြှနျတျော လဲ အဲ့အသံကွား Facebook ပျေါက သဘောင်ျရှကျအကွောငျးက စာဖတျ ဒီလိုနဲ့ သှားတိုငျပငျတယျ။ဒီလိုဒီလိုတော့ရှိတယျ ကြှနျတေျာ့ ကိုယုံလို့ရငျကြှနျတျော ပွောတဲ့ ဆေးနညျးကိုသောကျမှာလား ကြှနျတျော ရှာပေးမယျဆိုတော့ ။
မအကေမလုပျ သမီးကတော့အကိုရယျ ကမြသလေူပဲ အကိုဘာနနေေ သမီးအဆငျပွမေယျဆိုသောကျပါမယျလို့ ကောငျမလေးက ခတျခြိခြိလေးနဲ့ ကတုံးလေးပွောရှာပါတယျ။ဒီလိုနဲ့ ကြှနျတျော ဈေးရောငျးသှားရငျကုသိုလျ နစေဉျရအောငျ သင်ျဘော(အဖို)ရောကျလအေရပျတိုငျးရှာခူးပါတော့တယျ၊။
နောကျတဈလလောကျနတေော့ လူက ပွညျ့ပွညျ့ဝ၀ နဲနဲဖွဈလာတော့ ကောငျမလေးက ဆေးရုံကိုတဈခေါကျလောကျသှားခငျြနပေါတော့တယျ။သူသှားခငျြတဲ့အကွောငျးရငျးက သူရောဂါအခွနေကေို သိခငျြနတေဲ့
ဆန်ဒ ပွငျးပွရငျမနကျဆေးရုံသှား ခကျြခငျြ ဆရာဝနျကလဲ အနျ့တှအေော ကြှနျတျော ဖို့လဲ မုနျ့တှဝေယျလာပွီးအကို တဲ့ ကမြ အကွိတျမရှိတော့ဘူးတဲ့ ဆရာက ဘာဆေးတှသေောကျတာလဲ မေးနတေယျတဲ့။
ကြှနျတျော ဗြာ ဝမျးသာလိုကျတာ ကိုယျကူညီလိုကျတဲ့ သမေငျးရောဂါသယျက ပြောကျကငျးသှားတော့ဘဝမှာ အတျောကို ပီတိဖွဈတဲ့နပေ့ဘဲ ဒါကွောငျ့ သင်ျဘောရှကျသညျ ထိုရောဂါတဈခုထဲကိုသာပြောကျစတောမဟုတျပဲ
အမြိုးမြိုးသော အရာဆဲလျတှအေမွဈတှကေိုခွနေိုငျစှမျးရှိတာမို့ကငျဆာသမားတှအေထူးသငျ့တျောတယျလို့ တိုကျတှနျးနှိုးဆျော လိုကျရပါတယျ။စာမရေးတတျလို့အမှားပါရငျခှငျ့လှတျပါ။လမျးပွကွယျဖွူ
အစာအိမျဖွဈတဲ့သူတှလေဲသောကျနိုငျပါတယျအရမျးကောငျးပါတယျ။အဖိုပငျပါ သူ့အမွဈကို သကွားနဲ့ရောပွုပျပွီးစားရငျ အသညျးရောဂါပြောကျပါတယျ။အကွမျးပနျကနျလုံးနဲ့မနကျတခှကျညတခှကျသောကျပေးပါတပါတျအတှငျးသိသာလာလိမျ့မယျ….
အဖိုပငျပါ သူ့အမွဈကို သကွားနဲ့ရောပွုပျပွီးစားရငျ အသညျးရောဂါပြောကျပါတယျ။သဘောပငျအဖို အမသိခငျြရငျ အမွဈအဖြားကိုကွညျ့ပါ အမွဈအခှပါရငျအမ အခှမပါရငျအဖို ။
ကနြျောကတော့သင်ျဘောရှကျလတျလတျဆတျဆတျကို ပွုတျလညျးစားတယျ ….မီးမွှိုကျပွီးလညျး ရစေငျစငျဆေး ငပိခကျြနဲ့တို့စားပါတယျထူးခွားခကျြကတော့ကနြျောဝမျးနဲ့ပတျသကျတဲ့ရောဂါအစာအိမျဝဒေနာလုံးဝမရှိပါကွောငျး တဲ့ဗြာ…..။